I-VALDEZ - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Iyintoni intsingiselo yegama lokugqibela elinguValdez?
Inqampu yeValdez inemvelaphi engaphezu kweyodwa:
Igama lomnxeba lithetha ukuba unyana kaBaldo (ovela kwisiJamani, "unesibindi"); UBoldo ungumncinci kaBaltazar, omnye wamathathu.
Omnye owayevela eValdéz (etafuleni), eliguqulelwe ngokoqobo ngokuthi "ukusuka entlameni."
UValdez ngowama- 47 aqhelekileyo igama laseSpain .
Igama elithile Igama lokuphala : VALDES
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-VALDEZ
Jerónimo Valdés - umphathi waseSpeyin kunye negunya lakwaCuba
Kuphi igama le-VALDEZ igama eliqhelekileyo?
Iirejista, ezisetyenziselwa uluhlu lwamagama ahlukeneyo (iirekhodi zokubalwa kwabantu, iincwadi zeefowuni, iirekhodi zokuzalwa, njl njl.) Ukufumanisa ukuhanjiswa kwegama, amabango ukuba iValdez yiyona nkcukacha yezona-949 eziqhelekileyo kwihlabathi, kwaye ixhaphake kakhulu eMexico. UValdez ufana ne-35 yeyona nkcukacha exhaphakileyo kwiRiphabhlikhi yaseDominican, eyi-67 eParaguay kunye ne-73 eMexico.
I-WorldNames PublicProfiler, engabonakali ukuba ifake idatha yenkwenkwela evela eMexico, ibonisa ukuba ukusetyenziswa kwegama le-Valdez kudla ngokuthe rhoqo kwi-Argentina, ngokukodwa kwi-Northwest Argentina, eGran Chaco, Cuyo naseMesopotamia. E-United States, iValdez ixhaphake kakhulu eNew Mexico, eTexas naseColorado.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name VALDEZ
I-Valdez Family Crest - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injengekhaya laseValdez okanye iingubo zeengalo zegama le-Valdez. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Iprojekthi yeDNA iDDEZ
Abantu abathile abanegama le-Valdez bayamenywa ukuba bajoyine le projekthi ukuze basebenze kunye ukuze bafumane ifa labo elifanayo ngokusebenzisa ukuhlolwa kwe-DNA nokwabelana ngolwazi.
I-VALDEZ Iforum yoLuntu lweGenaalogy Forum
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwinzala ka-Valdez okhokho emhlabeni jikelele. Khangela iforamu yezikhundla malunga nookhokho bakho base-Valdez, okanye ujoyine iforum kwaye uphume imibuzo yakho.
Uhlobo loNtsapho - I-VALDEZ Genealogy
Phonononga ngaphezu kwezigidi ezi-1.7 ezivela kwiirekhodi zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca enxulumene nomnxeba weValdez kule webhsayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
GeneaNet - Iirekhodi zeValdez
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanegama le-Valdez, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
Uzalwane lwaseValdez kunye neNtsapho Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanenkampu yaseValdez kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Ancestry.com: Igama likaValdez
Phonononga ngaphezu kwezigidi ezi-2.8 ezirekhodiweyo ezigciniweyo kunye neenkcukacha ezigciniweyo, kubandakanywa iirekhodi zolwazi, uluhlu lwabagibeli, iirekhodi zemikhosi, izenzo zomhlaba, i-probates, iintando kunye nezinye iirekhodi zegama le-Valdez kwi-website ye-subscription-based, i-Ancestry.com
I-Battle of Ypres 1915 Iindleko ze-6000 zeCanada
Thetha Nezilwanyana Zakho ngeSpanish
Indlela yokwenza iimpawu ezivela kwiCall
Ukuqonda ukuhluka phakathi kohlanga kunye nobuhlanga
Imbali Yemililo Yokuqala yoMlilo kunye neentambo zomlilo
Imfazwe yokuKhanya: Isikhokelo kwi-DC ye Lantern Corps
Uninzi lwabadlali beCheerleaders's Favorite Cheers
I-Libero kwiVolleyball: I-Specialist Defensive
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya / yeZixhenxe eziMinyaka: 1760-1763